Svika pakuziva makumi mashanu neshanu yemasanganiswa akanakisa eGolden Retriever - Inobereka
Svika pakuziva makumi mashanu neshanu yemasanganiswa akanakisa eGolden Retriever
Gore negore, Golden Retrievers inzvimbo muAKC yepamusoro shanu imbwa dzinozivikanwa. Vanodikanwa nehunyanzvi hwavo uye kugarisana kwavo, vaGoldens vakasimbisa nzvimbo yavo seyakajairika mhuri canines.
Hazvishamisi kuti kusanganiswa kweGolden Retriever kuri kuwedzera, zvakare. Asi nezvakawanda zvokusarudza kubva, zvakaoma kuziva kuti wotangira papi.
Saka ngatiitei sezvinoitwa naVaGolden, uye tonyura mukati chaimo!
1. Border Collie & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden Collie)
2. Siberian Husky & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goberian)
3. Cocker Spaniel & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goridhe Cocker Retriever)
4. Bernese Mountain Imbwa & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden Mountain Imbwa)
5. Yorkshire Terrier & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goldenshire)
6. Basset Hound & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden Hound)
7.Irish Setter & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goridhe yeIrish)
8.Jack Russell Terrier & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goridhe Jack Retriever)
9.German Mufudzi & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goridhe Mufudzi)
10. Poodle & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goldendoodle)
11. Old Chirungu Sheepdog & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goridhe Gwai)
12.Rottweiler & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden Rottie)
13.Vizsla & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden Vizsla)
14. Labrador Retriever & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goldador)
15. Beagle & Golden Retriever musanganiswa (AKA Beago)
16. Belgian Malinois & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden Malinois)
17.Boxer & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden Boxer)
18. Chihuahua & Golden Retriever musanganiswa (AKA Golden Chi)
19. Chow & Golden Retriever musanganiswa (AKA Golden Chow Retriever)
20. Corgi & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden Corgi)
21. Dachshund & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden Dox)
22.Dalmatian & Golden Retriever musanganiswa (AKA Goldmation)
23. Doberman & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goridhe Doberman)
24.Great Dane & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Great Goridhe Dane)
25.Great Pyrenees & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden Pyrenees)
26. Saint Bernard & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden Saint)
27. Samoyed & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden Sammy)
28. Pitbull & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goldenbull)
29. Cavalier King Charles Spaniel & Golden Retriever musanganiswa (AKA Golden Cavalier)
30. Afghan Hound & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Afghan Retriever)
31. Alaskan Malamute & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Alaskan Goldenmute)
32. Bullmastiff & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goridhe Bullmastiff)
33. Chirungu Pointer & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA American Gointer)
34 Akita & Golden Retriever mix (AKA Golden Akita Retriever)
35.Weimaraner & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goldmaraner)
36 Lhasa Apso & Golden Retriever musanganiswa (AKA Goldenapso Retriever)
37. Airedale Terrier & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goldendale)
38. Shar Pei & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden Pei)
39. Shetland Sheepdog & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goridhe Sheltie)
40. Newfoundland & Golden Retriever musanganiswa (AKA Golden Newfie)
41. Scottish Terrier & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Scolden Terrier)
42. Springer Spaniel & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Spangold Retriever)
43.Chirungu Mastiff & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA English Goldstiff)
44. Chirungu Bulldog & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goridhe Chirungu Bulldog)
45 American Bulldog & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden American Bulldog)
46. ​​Rhodesian Ridgeback & Golden Retriever musanganiswa (AKA Golden Ridgeback)
47. Catahoula Leopard Imbwa & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goridhe Catahoula)
48. Shih Tzu & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden Shih Tzu)
49. Blue Heeler & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden Heeler)
50. Pug & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden Pug)
51. Poodle, Cocker Spaniel, & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Mini Goridhe Retriever)
52. Greyhound & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden Greyhound)
53 Shiba Inu & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Golden Shiba)
54.Malta & Goridhe Retriever kusanganisa (AKA Goridhe yeMalta)
55.Australia Mufudzi & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goridhe yeAustralia Mufudzi)
56. Anatolian Mufudzi & Goridhe Retriever musanganiswa (AKA Goridhe Anatolian)
57. Schnauzer & Golden Retriever musanganiswa (AKA Golden Schnauzer)
Ndeupi weGolden Retriever musanganiswa waunounza kumba?
Sangana neanodiwa weGolden Retriever
Gundog nemadzitateguru, Vanodzosera Goridhe vakatanga kukwira kwavo kuita mukurumbira munguva yekupedzisira 19th uye kutanga kwema 20th century. Goldens akakurumidza kutora kukoshesa kwavo unyoro asi uchishanda nesimba , uye zvimwe zvese nhoroondo.
Yakatumidzwa zita, iyo Goridhe Retriever inosiyaniswa nejasi rayo rakashata. Huru yavo yakareba, gobvu inouya mune yakapfuma shades ye blonde negoridhe, ichiita kuti rudzi urwu ruonekwe nyore.
Sangana neGold Retriever imbwa
Zvinyoro zvingave zviri, Goldens akanaka-akaenzana canines.
Varume vakuru kazhinji inomira 23-24 inches (58-61 cm) kureba uye inorema 65-75 mapaundi (29-34 kg). Vakadzi vakazara zvizere upamhi hwemasendimita 21.5-22.5 (55-57 cm) paunosva uye kazhinji unorema mapaundi 55-65 (25-29 kg).
Kupa chimiro chavo uye zest yehupenyu, Goldens inoda kweinenge awa yekurovedza muviri mazuva ese. Kuti varambe vaine mafuta, ivo vachada 2-3 makapu yeproteine-inorema chikafu chakaomeswa, yakakamurwa kuita mbiri kudya.
Uye usatsvedza pakushambidzika, futi! Iyo yakanaka goridhe Retriever mane inoda kukwesha kwemazuva ese kudzivirira mateti nemachira.
Neraki, idzi dzinodiwa dzinofarira kurarama makore gumi kana anopfuura, dzichizvirumbidza pavhareji yeupenyu hwe Makore 10-12 . Mhando dzakasiyana dzekenza dzinojairika muGolden Retrievers, zvakadaro. Mamiriro ezvinhu akabatana (senge hudyu dysplasia ) zvinonetsa, zvakare.
Kutaura nezvemaGolden Retriever mahybrids, anoita kunge ari kuwedzera kuwedzera kufarirwa. Asi chii chaizvo chiri pamusoro peaya marongero emhando ayo ane vanoda imbwa kwese kwese vachichemera yavo yega yeGold mix mix?
Nei Golden Retriever inosanganisa hasha dzese?
Crossbreeds ari kudiwa kwezvikonzero zvinoverengeka. Kune kutanga, vanogona kunge vari kashoma kuti vagare nhaka mamiriro ehutano zvakajairika imbwa dzakachena.
Pamusoro pezvo, hybrid pooch inobvumidza iyo hukuru hukuru hwehunhu hunhu kupfuura iwe zvaungaone mune yakachena.
Goridhe Retriever inosanganiswa inowanzo kuve ine hushamwari uye inodzidziswa kupfuura vamwe vavo chaivo. Tora rudzi rwekusimbisa rwekudzivirira, semuenzaniso. Kuvayambuka neGolden Retriever kunowanzo guma ne pooch iyo yese murwere uye yakangwarira.
Kana kuti pamwe unoyemura hunyanzvi hwekutsvagisa imbwa hound, asi unogona kuzviita pasina kuomesa chiratidzo chavo. Iyo yeGolden Retriever-hound musanganiswa inowanzoita kupindura mushe pakudzidziswa pasina kukanganisa kwavo muvhimi-tracker hunhu.
Huru yako yegoridhe yakasvibirira chaiyo uye chitarisiko zvinoenderana nerumwe rudzi rwevabereki.
Mimwe mijenya yeGolden Retriever yakakura kwazvo, inogona kukanganisa nemabhiza madiki. Vamwe vanogona kukwira pamakumbo ako pasina dambudziko.
Vazhinji vakadaro pakati nepakati refu fur , saka zvakachengeteka kutaura kuti kunyangwe uine musanganiswa upi waunosarudza, kushambidzika ichave nzira yehupenyu. Ronga pane mashoma e3 nguva pasvondo , uye kumusoro iyo frequency kana imbwa yako ine jasi refu.
Tinofanira zvakare kucherechedza kuti ingangoita yega yeGolden Retriever musanganiswa sheds kune imwe nhanho. Ndine urombo, vanorwara!
Kugara uchirovedza muviri unofanirwa kune aya mazamu. Kunyangwe kana mumwe wevabereki vemuputi wako ari simbe kusvika pakati, yavo yeGolden Retriever divi inowedzera mikana yekuti iwe uchave uine makumbo mana-fireball pamaoko ako.
Zvichienderana neyako Goridhe Retriever musanganiswa wemagetsi uye saizi, vangangoda zvimwe kana zvishoma chikafu. Zviduku zvegoridhe zvidhori zvingangoda 2-3 makapu Zvekudya pazuva, nepo hofori yemisanganiswa yeGoridhe inoda padhuze ne 5 kana 6 makapu pazuva.
Uine zvakawanda zvakasiyana, unosungirwa kuti uwane wako akakodzera pup pakati peedu runyorwa rweGolden Retriever musanganiswa. Ramba uchiverenga kuti udzidze zvakawanda nezve yega yega!
Sangana neBorder Collie & Golden Retriever musanganiswa
Kugara nhaka hunhu hwevabereki vavo, a Goridhe Retriever Border Collie musanganiswa rine simba uye rakashinga. Uku kushanda uye kufudza kwakayambuka kwakaringana dzimba dzemitambo!
Kupa iyo yeGolden Collie yekutyaira uye yekuda, kurarama hupenyu hwekushandira hakugoneke. Iva wakagadzirira kuzvipira kwakakomba - uye wakakomba mubairo- neizvi yakakwira-yakasimba musanganiswa !
Yakachena Huskies ndiyo yekirasi clown uye yekirasi inoshungurudza yakakunguridzirwa kuita imwe. Nekuda kweizvozvo, iwe unogona kutarisira iyo Goberian kuve kana kamwe chete dash misikisi. Mazuva ese kushamisika neizvi spunky musanganiswa werudzi!
Sangana neSiberian Husky & Goridhe Retriever musanganiswa
MaGoberian anoteerera maGolden Retriever magene anoderedza maHusky hijinks neimwe nzira, asi kudzidziswa kusingagumi uye chiitiko zvakakosha kuti ichengetedze ichi chakayambuka kubva kumhanya amok!
Sangana naPippin, iyo Cocker Spaniel & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Imba yakazara? Hapana dambudziko. Muridzi wega? Zvakare zvakanaka. Iyo Ndarama Cocker Dzosa r ndeye poochani pooch uyo anofara chero chero kupi.
Zviduku zveGold Retrievers , sekuzivikanwa kwavanoitwawo, rumbidza kushamwaridzana . Ivo chaizvo havasarudzike nezve kwazvinobva, futi. Ingo chengeta ziso kuvana vadiki pavanotamba neichi pooch.
Goridhe Cocker Retrievers vane moyo munyoro uye vanoda kubatwa nehanya.
Imbwa dzeGomo reGoridhe iwo akanyanya hombe mabhora e fluff. Vakuru vanogona kuyera kusvika pamasendimita makumi maviri nemasere (71 cm) uye kuyera angangoita 115 mapaundi (52 kg)!
Sangana naArlo, iyo Bernese Mountain Imbwa & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Mafuremu avo akasimba akafukidzwa nejasi gobvu rakapetwa rinogona kuve chero mubatanidzwa ngura, dema, kana chena .
Takataura here kuti aya mabhora anoputika ari zvine simba kwazvo ? Enda kumberi uye guruva kubva kubhutsu dzako dzekufamba, uye sunga shangu dzako dzekumhanya.
Iwe unozovada ivo kuti vafambirane neiyi mweya ine mweya! Kupa saizi yavo, zviri nani kuti vana ava vagare mumusha une nzvimbo yakawanda.
Iyo Golden Mountain Imbwa huru kuvaka zvakare zvinoreva kuti hudyu dysplasia uye zvimwe zvakabatana zvinhu zvinogona kunetsa. Imbwa dzeGomo reGoridhe dzinogona zvakare kuve panjodzi huru ye von Chirwere chaWillebrand , inofambira mberi retinal atrophy (PRA), uye gomarara.
Iyo Goldenshire compact, yakareba-yakavharwa mate. Ichikurumidza-njere uye rambunctious, Golden Yorkies inogona kushandura chero chiitiko kuita mutambo.
Muchokwadi, imbwa idzi dzinoda padhuze ne Maminitsi makumi mapfumbamwe ekurovedza muviri zuva rega rega . Simba ravo hariperi! Hautitende here? Tarisa ino inokosha Yorkie Retriever rabblerouse neayo munhu!
Inotamba sezvavari, imba isina vana vadiki yakakosha kune iyo Goldenshire. Izvi zvakayambuka kazhinji inofarira vakuru uye hazviwanzo kutora zvakanyanyisa kuvana vadiki.
Uyezve, maGoldenshires madiki pooches! Dzinoda kubatwa zvakaomarara.
Yakura zvakakwana, yako Golden Yorkie inomira 10-15 inches (25-38 cm) kureba uye huremu 20-30 mapaundi (9-14 kg). Nepo kukura kwavo kuchikasiyana zvakanyanya, funga nezveaya imbwa senge pane imwe nzvimbo pakati peiyo diki yeYorkshire Terrier uye yakasimba Goridhe Retriever.
Sangana neBasset Hound & Goridhe Retriever musanganiswa
Kunzwa kunetsekana nezvinodiwa zvekurovedza muviri zvawaona kusvika zvino? Regai iyo Goridhe Hound kukuvimbisa iwe kuti kumwe kusanganisa kweGoridhe kunogona kuve husimbe chaizvo.
Basset Retrievers vanodisa kubatana newe kuti ufambe kana kuitisa muhondo yekukwevera-muhondo… asi kurara pamubhedha inguva yekunakidzwa inodiwa, futi.
Kuwedzera kune zvine mwero zvekurovedza muviri zvinodikanwa, maHolden Hound haadi kushambidzika zvakanyanya seimwe mimwe mijenya yeGoridhe. Basset Hound vane huta hupfupi pane Goldens. Kana pooch yako inogara nhaka yejasi rakafanana, ivo havangadi kukweshwa kazhinji.
Lackadaisical kunyange hazvo iri, iyi yepakati-saizi inonyurura kutarisisa. Vanoda kutamba uye kushandisa nguva nepakeji yavo ..
Paavhareji, vakuru Hound Hound anorema 40-60 mapaundi (18-27 kg) uye mira kwete kupfuura 14 inches (36 cm) kureba. Kuvaka kwavo kwakabatana pamwe nehukama hwavo hwakanyanya kunovaita a yakanakira mhuri !
Sangana neIrish Setter & Goridhe Retriever musanganiswa
Iyo Goridhe yeIrish inokatyamadza zvisingaite, kunyanya tichifunga saizi yayo. Sevanhu vakuru, aya canines anomira 22-26 inches (56-66 cm) akareba uye anorema 6 0-75 mapaundi (27-34 kg). Zvakadaro, ivo vanozivikanwa yavo nyasha nemitambo .
Asi chinonyanya kufadza igoridhe reIrish Irish inokatyamadza mvere dzvuku dzendarama. Kuchenesa kwembwa yega yega kuchave kwakasiyana, asi mwana uyu anovimbiswa kupenya!
Kuuya kubva kumhando mbiri dzevabereki vane hungwaru, Golden Irishes inoda zvese zvemuviri nezvepfungwa kukurudzira kuti vafare. Ivo vanoda mvura, saka usatya kutya kuchinjisa maitiro uye kuenda navo kunoshambira!
Sokunge kuti izvo zvaive zvisina kukwana, iyo yeIrish Irish ine hutano hwakanyanya kubhoot. Ivo vari panjodzi yehudyu dysplasia uye ectropion, asi imbwa idzi dzinozivikanwa kurarama kwenguva yakareba Makore gumi nemashanu!
Ndarama Jack Retrievers inogona kukanganisika zviri nyore nekuda kwemhuka dzakazara. Fuzzy uye petite, idzi dzinoyevedza imbwa dzinogara dzichitaridzika sembwanana, zvisinei nekuti vakura zvakadii. Kusvika kumagariro chaiwo eGolden Jack, hazvo, izvo hazvitombo fungidzike.
Sangana neJack Russell Terrier & Golden Retriever sanganisa mwana wembwanana
Iwe unogona kutarisira pooch yepakati-saizi, asi iwo akaenzana uye iwo mavara ejasi achasiyana. Iwe unogona kubheja pahunhu husinga regedze, zvakadaro!
Jack Russell Terriers vanogara uchienda, uye yako Goridhe Jack yakagadzirirwa kugamuchira imwe yeiyo moxie.
Goridhe Jack Retrievers inofanirwa kunge iine hutano, asi chenjerera zviratidzo zvezvinhu zvakabatana kana mamiriro eziso . Tenga yako Golden Jack kubva kune anozivikanwa muberekesi, enderera nekushanya kwavo vet, uye uyu anokara mwana anofanira kunge ari padivi pako makore gumi!
Hatidi kukuudza izvozvo Vafudzi veGerman uye maGolden Retrievers ndiwo mutambo wakaitwa mudenga redzidziso. Mhedzisiro yeiyi maviri canines? Vakavimbika, vane rudo Goridhe Mufudzi .
Sangana neGerman Mufudzi & Goridhe Retriever musanganiswa
Vafudzi veGoridhe ndinoda kubatikana , uye vanovavarira kufadza. Kudzidzisa uku kuchenjera kuyambuka kuchave cinch!
Kupa kwavo kwepfungwa acumen, yako Goridhe Mufudzi anofefetera kuburikidza nekutanga kuteerera.
Tora ichi chinoshanda chakayambuka chakabatanidzwa mukugwinya kana kudzidzira basa remumhuno kuti uchengetedze dzakapinza!
Sangana nePoodle & Golden Retriever musanganiswa
Vanoda imbwa vane allergies, ino inguva yako! Iyo Ndarama ndeimwe chete yegoridhe inosanganiswa neiyo mukana weiyo hypoallergenic jasi .
Kutenda kune Poodle's yakaderera-kudonhedza majini, iyi crossbreed kazhinji inokanda zvishoma zvakaderera pane mamwe maberekero pane edu runyorwa.
Izwa zano, zvakadaro, kuti 'yakaderera-kudurura' uye 'hypoallergenic' hazvisi zvakafanana chinhu. Iwe unogona achiri kuona yakasununguka makushe kubva kune ino yakapetwa-yakavharwa canine nguva nenguva!
Sangana naLucy, wekare Chirungu Sheepdog & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Dzemakwai egoridhe vari 80 mapaundi (36 kg) yemakushe emvere, ane zviso zvakaumbwa neka canine. Chengetedza mari yakanaka yembwa (kana muchengeti akanaka) kune iyi yakaputsika.
Iri jasi rinodakadza rinoda yakawanda TLC kuti irambe ichitaridzika zvakanakisa!
Zvinogona kuve zvakaoma kuona iyo yeGolden Retriever pesvedzero, tichifunga kuti Goridhe Sheepdogs dzinogona kazhinji kuva mumvuri we shava kana nhema .
Uchaona zveGoridhe hushamwari hunhu kupenya kuburikidza, zvakadaro.
Rottweilers vanozivikanwa nehunhu hwavo hwekudzivirira, zvichiita iyo Ndarama Rottie musanganiswa wakakodzera wedziviriro yemumba uye cuddle bug.
Sangana naScottie, iyo Rottweiler & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
The Goldenweiler inogona nyore kumusoro mapaundi zana (45 kg) kana yakura zvakakwana, ichivaita mamwe emhando dzakakura kwazvo pane yedu runyorwa. Vakomana vakuru ava chokwadi unoda yadhi yakakura pamakumbo marefu iwayo!
Sangana neMango, iyo Vizsla & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Ndarama Vizslas zviri pakati nepakati zvine zvinhu zvinomanikidza. Kazhinji kukura pane 60 mapaundi (27 kg), Golden Vizslas vane huta hwakareruka, mu mhangura kana toni dzegoridhe .
Ndiwo maziso eGolden Vizsla, zvisinei, izvo zvinovaisa parutivi. Yakachena Vizslas kazhinji vane bhuruu kana grey maziso anononoka kusviba sezvavanokura. Yako Goridhe Vizsla mbwanana inogona kugara nhaka iwo maitiro akafanana!
Sezvo mwana wako anokura, tarisira kuti simba ravo riwedzere, zvakare. Vizslas inogona kumhanya nekukurumidza se40 mph , saka zvingaite kunge yako Goridhe Vizsla ine maroketi etsoka.
Kutyora chinodzivisa ruzha handizvo zvese zvavanogona, hazvo. Vane ruzivo vavhimi , Golden Vizslas ndiwo musanganiswa wakakodzera wekuzvivimba uye kudzidziswa. Vachaita zvakanaka nekudzidziswa kusingagumi uye kazhinji mikana yekurodza hunhu hwavo hwekuvhima hunhu.
Iwe haugone kuenda zvisizvo kana iwe uchibatanidza maviri asina nguva maberekero senge Labradors uye Goldens.
Sangana neLabrador Retriever & Goridhe Retriever musanganiswa
Uine inonakidza-inoda, yakapusa-kufamba , Ndarama vakavimbiswa zvakanyanya kuve vakakwana kune vese varidzi vembwa.
Sangana naBella, Beagle & Golden Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Goridhe Beagles inowanzo kuve inofara uye iri nyore kudzidzisa. Asi zvinoenderana nekuti ndeupi mubereki unoberekera yako Beago inotora mushure, vanogona kuve nehurefu hwekutarisa - uye chishuwo chakasimba chekutevera hwema chero kwahunogona kutungamira.
Uku kukanganisa kwakanyanyisa kunodonha kunowira pakati 30-60 mapaundi (14-27 kg), saka havazove vakawandisa kubata. Vachadaro ita zvakanaka mumafurati! Ingova nechokwadi chekupa Beago yako yakawanda yekurovedza muviri.
Sangana naPam, muBelgian Malinois & Golden Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Munhu mukuru Goridhe Malinois inogona kuyera kusvika pamapaundi makumi matanhatu (27 kg) uye kazhinji ane dema, tan, uye goridhe fur. Golden Malinois zvirokwazvo inotaridzika!
Yaro Belgian Malinois mubereki anozivikanwa nehungwaru, uye iyo yeGolden Malinois haina kusiyana. Uku kuyambuka kwakangwara, vanogona kuzviona sevakangwara kupfuura iwe!
Goridhe Malinois ita zvakanaka mudzimba dzinoshingaira , kunyanya kana vaine basa rekuita. Vachengete vakabatikana, uye ivo vanozoita yakanaka mhuka mhuka!
Sangana naSandy, iye Boxer & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Goridhe Mabhokisi ndiwo makuru pooches anogona kukura kusvika 22-25 inches (56-64 cm) akareba uye anorema 60-75 mapaundi . (27-34 kg). Kupa saizi yavo uye simba rehunyoro, ivo vachazoda nzvimbo yekubuda kwavo zoomies!
Uku kuyambuka kuri kure ne hypoallergenic. Nguo dzavo dzinoenda chero kupi kubva kupfupi kusvika kure uye rakadeurwa gore rese.
VaGoridhe maBoxers vanogona zvakare kuve zvakati omei kudzidzisa kana zvavo Wetsiva divi rinotora. Kana iwe uine ruzivo nekusindimara asi inotamba mbwanana, iyo yeGolden Boxer inogona kunge iri yako!
Sangana naLiaa, iyo Goridhe Chi - Mufananidzo sosi
Iyo inotapira uye inopwanya Goridhe Retriever Chihuahua musanganiswa ndeyechokwadi kukuchengetedza pazvigunwe zvako. Gadzirira rudo rwakawanda uye yakawanda antics!
Golden Chis inowanzo fanika senge stockier Chihuahua , asi kazhinji zvinowoneka zvakanyanya.
Inonzwika senge yakakwana Goridhe Retriever musanganiswa? Chiri kuda kurira zvirinani. Golden Chis vanorarama avhareji ye Makore 14-15 , saka unogona kutarisira kumakore mazhinji anofara neiyo hybrid.
Sangana neChow Chow & Goridhe Retriever musanganiswa
Ndarama Chows ndiwo maratidziro anotonhorera, akadzikama, uye akaunganidzwa. Iyi lowkey yakayambuka ishamwari yakanaka kwazvo kune husimbe Mugovera mangwanani.
Aya pooches anogona kuyera chero kupi kubva 50-75 mapaundi (23-34 kg), saka ungangoda kudyara muhomwe hombe. Yako fluffy Goridhe Chow Retriever ingangoita yekushandisa yakawanda yeawa yakakomberedzwa padivi pako!
Sangana naMiller, iye Corgi & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Mutsva kune imbwa yekuva mubereki? Iyo Ndarama Corgi zvingave zvakakwana kwauri. Hudzi idzi dziri inodzidziswa kwazvo uye inofambidzana.
Izvo zvakare hazvikure kusvika kuhukuru hwakakura, izvo zvinogona kukwezva kune vanogara mumafurati.
Izvo izvo iyo Golden Corgi inoshaya muhukuru ivo vanogadzira mune fur. Uine jasi rakazara, riri pakati nepakati refu, iwe nemwana wako munenge musiri mweni kune yekutsvaira bhurasho.
Sangana neDachshund & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Iyo Ndarama Dox ine simba uye inoshamwaridza vana. Asi tarisa kunze- rudzi urwu rwakashinga runogona kuve neyakaoma musoro!
Kunyangwe kana yako Golden Dox yakasimba-ichida, iye imbwa inofambidzana pamoyo. Unoshanda kubva kumba? Uri chiroto cheGoridhe Weiner Imbwa inoitika. Uyu pup anonyatsoda kutariswa uye inogona kukudziridza kuzvidya mwoyo kunetseka pasina izvozvo.
Sangana neDalmatian & Golden Retriever musanganiswa
Ndarama dzinogona kutaridzika zvakanyanya senge fluffier vhezheni yemubereki wavo ane mavara, kana ivo vanogona kuve neyakajeka-nhema-chena jasi mune mapatani iwo ega. Chero nzira, uyu musoro-wekutendeuka uzere nesimba rinoputika uye mweya wakasimba!
Kureba uye kurema kwevakuru kweGoldmation kuchasiyana, asi zvakachengeteka kutaura kuti rudzi urwu ruchave pakati nepakati.
Neraki, Goldmations inowanzo kuve noutano kupfuura yakachena Dalmatians murarame Makore 13-14. Ivo vanowanzo tenderera pfari uye hudyu dysplasia, zvakadaro.
Sangana naMocha, iyo Doberman & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Mumusika wembwa yevarindi asi haidi hako yako wega Kujo? Iyo Ndarama Doberman inogona kunge iri munzira yako.
Meshing iyo Doberman's yakasarudzika mumugwagwa wakangwara nehunhu hunobuda hwaGoridhe, uyu muchinjikwa unogona kuva vese shamwari nevarindi. Iyo Goridhe Doberman inopa zvechokwadi zvakanakisa zvepasirese nyika!
Sangana naOliver, the Great Dane & Golden Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Iwe unoziva iwo masanganiswa eGoridhe ayo anogona kupetwa se mini-bhiza? Iyo Yakakura Goridhe Dane ndomumwe wavo. Mukuru Great Dane -Golden Retriever michinjikwa inogona kuyera zvakanyanya se 200 mapaundi (91 kg) uye mira 33 inches (84 cm) kureba!
Yakakura seyingave iri, Great Goridhe maDhani ari ane moyo murefu uye munyoro pamwe neadiki kwazvo enhengo dzepaketi.
Zvakanaka, ngatijekesei. Akakura eGoridhe maDhani edza kuva munyoro. Tichifunga kuti ivo vakuru kune vamwe vana, zvakadaro, iwe uchazoda kutarisa nguva yekutamba kuti uve nechokwadi chekuti vana vevana havakuvadzwe nekusaziva.
Isu tinofanirwa zvakare kutaura kuti Great Goridhe maDanes zvinosuwisa vane hupenyu hupfupi pane mamwe maGolden musanganiswa. Iwe unogona kutarisira iyi pooch kurarama Makore 8-10. Asi tivimbe, iwo makore achazadzwa azere nezviyeuchidzo neako Akakura eGoridhe Dane!
Sangana neGreat Pyrenees & Golden Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Iwe unoda imbwa ine jasi rakadzika here? Iyo Goridhe Pyrenees Anozvirumbidza neyakaora, yakareba ndarama kana tsvuku makushe pane furemu ine simba.
Asi usarega saizi yavo ichikupusisa! Iyo Golden Pyrenees inotapira sezvavanouya, ichiita iyo sarudzo yakanakisa yemhuri.
Sangana naMila, iyo Saint Bernard & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Saint Bernard Retriever, Goridhe Bernard, Goridhe Mutsvene -Hazvinei kuti unovadaidza kutii, pane zvakawanda zvekuda nezve iri hofori rakayambuka.
Vasande Goridhe inogona kupfuura mapaundi zana (45 kg), iine mamwe anorema anosvika mazana maviri emapaunzi (100 kg) . Vakamira 36 inches (91 cm) kureba, Saint Bernard Retrievers ari, mune rimwe shoko, akakura.
Kunyangwe pahukuru hwavo, veGolden Saints vakadzikama uye zviri nyore kudzidzisa. Imbwa iyi ndeye sarudzo hombe kune varidzi veavice vanosarudza mhando hombe!
Nepo iyo Golden Bernard ichinge yakasununguka zvakakwana kuita mumba diki, ivo vanozofara zvakanyanya nenzvimbo yakakwana. Kana iwe usina yadhi yakachengeteka, tora wako weGoridhe Musande pakubuda kwembwa zuva nezuva kuti ugutse zvido zvavo zvekurovedza muviri.
Sangana neSamoyed & Goridhe Retriever musanganiswa
Goridhe Sammies zvirokwazvo hazvisi zvidiki, asi hazvisi zvakakura, futi. Vakuru kazhinji vanorema 50-75 mapaundi (23-34 kg) uye kuyera 21-24 inches (53-61 cm) pabendekete.
Yako Goridhe Sammy ichave inogutsikana zvakanyanya neiyo regimen inosanganisa iyo yepfungwa uye yemuviri chiitiko. Tora zororo mukati mekufamba kwako, uye uite kuti vadzidzise zvidimbu zvidiki kuti vanyatsovaneta!
Muchokwadi, iyo yakapfava, inogara ichishanduka-chinja yeGolden Sammy inogona kujairana neakasiyana mamiriro ekugara uye mararamiro. Iyi yemasanganiswa inozongofarawo kujoina iwe kumhanya sezvo ichizopetwa netsoka dzako.
Ramba uchifunga, zvisinei, kuti majasi avo akazara anovagadzira zvirinani zvirinani kutonhora mamiriro ekunze. Kana iwe uchigara munzvimbo inodziya, tora matanho ekudzivirira kupisa kwakanyanya mune ino fluffy Fido.
Sangana naPizookie, iyo Pitbull & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Kuputika nesimba, iyo Ndarama inogara ichitsigira chero chinhu. Chokwadi, iyo Goridhe Retriever Pitbull musanganiswa ichafugama padivi pako paNetflix marathon - mushure mekumhanya kweawa-refu uye nehondo mbiri dzekukakavara, ndiko kuti.
Sangana naBoone, iyo Cavalier King Charles Spaniel & Golden Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Ukabvunza iyo Ndarama Cavalier chiri chinangwa chehupenyu hwavo, ivo vachakuudza kuti irikuda vanhu vavo 24/7. Kutendeseka, yako Goridhe Cavalier angangozvinamatira kwauri kana vachikwanisa.
Iyo inozivikanwawo se Petite Goridhe Retrievers , Golden Cavaliers vanogona kuva chero kubva 12-24 inches (30-61 cm) akareba uye anorema 13-75 mapaundi (6-34 kg). Iyi ihuru yakakura, saka tinokurudzira kusangana nevabereki vako veGolden Cavalier kuti uwane zano rekuti mwana wako anozokura sei.
Nekuda kwehukuru hwavo uye doting chimiro, ichi chakayambuka chakanakira yekutanga-nguva imbwa varidzi. Idzi imbwa kwete kukodzera kwakanaka kune varidzi vanogara pasi , zvakadaro. Yakarongedzwa izere nesimba, Golden Cavaliers inoda 1-2 maawa ekurovedza muviri mazuva ese!
Sangana neAfghan Hound & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Yakagadzirwa kubva kune yakajeka Hound yeAfghan uye yakasimba Goridhe Retriever, iyo Afghan Retriever ndiyo yepamusoro ye canine dexterity. Mahombekombe avo marefu, ane wavy anowedzera kuhunhu hwavo hwakanaka, zvichipa uyu muchinjikwa mweya wekunaka uye simba.
Afghan Retrievers kazhinji haayeki kupfuura 60 mapaundi (27 kg) uye anogona kumira kusvika pamasendimita makumi maviri nemapfumbamwe (74 cm) kureba. Kunyange hazvo rudzi urwu rusina kukura, ivo vanoda nzvimbo yekumhanya.
Kutsvaga imwe nzira yekushandisa iyi yakasanganiswa? Iyo Afghan Retriever ndeye inonakidza kuvhima kana kufamba musango!
Sangana naRoscoe, iyo Alaskan Malamute & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Mazhinji eakasanganiswa emugadziri pane akanyorwa angave matsva, asi kwete iyo Alaskan Goldenmute. Tenda kana kwete, muchinjikwa uyu unogona kunge uripo kubvira kuma1800!
Ivo vanozivikanwa nekuda kwehunhu hwavo hunonakidza, hwakashata. Ingova wakagadzirira kudzidzisa, kudzidzisa, kudzidzisa neiyi inonakidza pup!
Alaskan Goldenmutes, achitora mushure mevabereki vavo, anogona kusvika 25 inches (64 cm) kureba uye huremu anosvika mapaundi makumi mapfumbamwe (41 kg) kana yakura zvakakwana. Yakafukidzwa mune yakasvibirira jasi jasi, yako Alaskan Goldenmute kuda akadururwa kunge anopenga. (Ino inogona kunge iri nguva yakanaka yekukwiridzira bhatiro rako. Usati hatina kukuyambira.)
Sangana neButtercup, iyo Bullmastiff & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Kukura kusvika panenge 27 inches (69 cm) kureba uye huremu pamusoro pezana remapaundi (45 kg) pakukura, iyo Ndarama Bullmastiff zvese zvakanakisa uye gargantuan.
Kupa kwavo kusatya, kuraira kuvepo, unogona kushamisika kuziva kuti iri rakasanganiswa rudzi ndirwo zvinofadza nyoro nemhuri yake.
Haisi chete iyi yekuyambuka ine moyo muhombe, iine muromo muhombe, futi. Iwo mahefty egoridhe Bullmastiff shaya ari chaizvo drool mafekitori. Napkin, chero ani?
Sangana naOnon, Chirungu Pointer & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Iyo American Gointer zvimwe zvisingawanzoitika, saka isu tichiri kudzidza nezve ino chaiyo Goridhe Retriever muchinjikwa.
Chatinoziva kusvika parizvino ndechekuti American Gointer ndeye inotapira-mweya, inononoka pup yakavakwa kuti itungamire inoshingaira mararamiro.
Shandisa awa kana zvakadaro uchitamba uye uchiongorora navo, wobva wagadzika kuti uwane kukwenya kwenzeve pamubhedha neiyo yakasanganiswa ine rudo.
Sangana neAkita & Golden Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Paunotarisa iyo Golden Akita , iwe uchaona akasiyana maficha kubva kune ese ari maviri maberekero emubereki: iyo Akita's kuvaka kwakasimba, iyo Golden Retriever's sun hue.
Iwe unogona kutarisira yako Akita weGoridhe kuyera 70-90 mapaundi (32-41 kg) uye kuyera 24-26 inches (61-66 cm) kana vapedza kukura.
Iwe unogona zvakare kutarisira hutano hwakanaka hweGolden Akita fur pane yako fenicha. Shamba ichi pup kakawanda pavhiki kudzora kudurura, asi usageze kazhinji. Ndarama Akitas vanokombamira mamiriro eganda , uye mabhati akawandisa anogona kukonzera kutsamwa.
Sangana neiyo Weimaraner & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Ndarama azere neshamisiko. Huru dzembudzi idzi dzinogona kuva chero chinhu kubva goridhe-toni kana sirivheri kune dema kana ndarira! Iyo chete garandi? Hapana maGoldmaraners maviri anozotaridzika zvakafanana.
Varume vanowanzove vakareba kupfuura vakadzi, vakamira 22-27 masendimita (56-69 cm). Vakadzi veGoldmaraners, nekuenzanisa, kazhinji vanoyera 18-20 masendimita (46-51 cm). Vese varume nevakadzi veGoldmaraners vanoyera kutenderera zvakaenzana, kazhinji 55-75 mapaundi (25-34 kg).
Sezvineiwo, bhachi reGoldmaraner iri inodzivirira mvura. Tora ivo kuti vashambire mudziva kana mudziva kuti vabatsire kudzinga imwe simba!
Vanogadzira goridhe vanoda ingangoita awa rekurovedza muviri zuva nezuva, saka enda kumberi utange kugadzira mepu-inonakidza nzvimbo munzvimbo yako.
Ingo rangarira kurega ichi chizvarwa chitambe kure-leash. Ivo vanogona kuve ne simba rekutyaira uye rakasimba rakazvimirira stereki!
Sangana naLia, iyo Lhasa Apso & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Iyo Goldenapso Retriever ndiyo epitome yeakanaka uye anokara. Iyi shaggy pooch ingangodaro isingamire chero yakareba kupfuura 16 inches (41 cm) kana kuyera kupfuura 50 mapaundi (23 kg).
Usazviita zvakamonyoroka, zvakadaro. Iyi fluffy donje bhora rembwa inogara nhaka yekuchengetedza maitiro kubva ku Lhasa Apso . Vimba nesu, Goldenapso Retrievers ari akashinga kupfuura zvavano tarisa!
Goldenapso Retrievers inowanzo kuve noutano, asi iwe uchafanirwa kunge uri wekutarisa mamiriro eziso semakata uye inofambira mberi retinal atrophy. Bloat uye hudyu dysplasia zvimwe zvinonetsa. Ipa uyu pup zvakawanda zvekurovedza muviri, uye dzivisa kuwedzeredza kuchengetedza hutano hwavo.
Sangana naSaber, iyo Airedale Terrier & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Kuvimba uye kubuda, Ndarama ita shamwari kwese kwavanoenda. Kunyangwe vari kubata masaisai pane rakazara vanhu gungwa kana kumhanya kuburikidza nepaki yakabatikana, yako Goldendale inonzwa kugadzikana zvachose, chero ivo vari padivi pako.
Goldendales anowanzo svika 21-23 inches (53-58 cm) uye kuyera 50-75 mapaundi (23-34 kg) nekukura. Huru dzadzo dzakakora dzinogona kuve dzakakora uye dzakasviba kana kuva nemafungu ane silky.
Iwe unogona kutarisira yako Goldendale kuve dema, chena, tsvuku, kana goridhe , kunyange mumvuri chaiwo usingatarisirwi.
Sangana naIker, iyo Shar Pei & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Iyo Ndarama Pei ndeimwe mhando ine chitarisiko chinoratidzika kunge chisina kujairika. Vanogona kunge vachikwenya nemabvudzi mapfupi senge Shar pei , kana kuti ane ganda rakatsetseka ane makiyi marefu seGolden Retriever.
Iyo yepakati-saizi yakayambuka, yako Goridhe Pei inowanzo kuyera 17-24 inches (43-61 cm) akareba uye anorema 40-75 mapaundi (18-34 kg).
Golden Peis anoita zvakanaka ne Maminetsi makumi manomwe nemashanu ekurovedza muviri zuva rega rega , yakavhenganiswa neyekugara uchidzidzisa zvikamu. Rudzi urwu runozvishingisa runoda muridzi ane ruzivo anoziva kubata kusindimara kwavo!
Ramba uchifunga kuti hupenyu hweGoridhe Pei hunogona kusiyana kubva Makore 8-15 . Ivo vari panjodzi ye pfari, hypothyroidism, uye von Chirwere chaWillebrand , naizvozvowo OCD uye bloat . Kugara uchishanya vet kunodiwa kuti ugare pamberi pemamiriro ehutano anogona kukanganisa mwana uyu.
Sangana neScotch, iyo Shetland Sheepdog & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Shetland Makwai vanozvarwa vafudzi, vanozivikanwa nekushanda kumaruwa eScotland. Kana iwe ukaisa ichi chinoshanda chizvarwa pamwe nekukwiridzira Golden Retriever, iwe unowana akajeka, akasimba Goridhe Sheltie !
Mazhinji Goridhe Shelties anorema 40-60 mapaundi (18-27 kg) uye mira 16-22 inches (41-56 cm) kureba. Kuuya kubva kumarudzi maviri ane vhudzi refu, Goridhe Shelties ane majasi akajeka mune akati wandei mavara: goridhe, tani, sable, nhema, chena, uye kunyange bhuruu merle !
Goridhe Shelties inogona kuita ne awa nehafu yekurovedza muviri zuva nezuva , asi ita shuwa kuti vanowana nguva yekuzorora, zvakare. Uku kuyambuka kuri panjodzi yezvinhu zvakabatana, kusanganisira patellar luxation, hudyu dysplasia, uye Legg-Mhuru-Perthes Chirwere .
Sangana neNewfoundland & Golden Retriever musanganiswa - Mufananidzo Sosi
Iyo Ndarama Newfie kurota kwemudiwa mukuru-rudzi kunoitika. Vanogona kusvika 24-29 inches (61-74 cm) akareba uye anorema kurova 75-150 mapaundi (34-68 kg)!
Kusanganisa mweya wakadzikama weGolden Retriever ne Newfoundland's pfungwa yekuzvarwa yekuzvidzivirira, Golden Newfies ichaita kukwana nemhuri chero ipi zvayo.
Izvi zvakagadziriswa zvakaputsika zvinoda rudo rwavo kudzoreredzwa zuva rese, zvichivaita sarudzo yakanaka yevashandi vari kure nevabereki vanogara pamba.
Scottish Terriers vari plucky madiki madiki. Spunk yavo yakasanganiswa nerunyararo rweGolden Retriever inotipa mufaro wakazara unova iwo Scolden Terrier.
Iyo diki- kusvika pakati nepakati yakasanganiswa, Scolden Terriers haifanire kukura kupfuura 24 inches (61 cm) kana kuyera kupfuura 40 mapaundi (18 kg). Zorora uine chokwadi chekuti pooch iyi inoramba iri pahukuru hunogadzikana kusvika mukukura.
Scolden Terriers ndeyechokwadi yekukuchengetedza iwe kufadzwa neyavo Hutongi asi hunhu hunofadza . Ivo havachahukura zvakanyanya senge yakachena yeScotland Terrier, asi ivo vachiri kuwana nzira yekuraira kwavo kwevanhu kutarisisa!
Sangana naLayla, iyo Springer Spaniel & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Spangold Kudzoreredza rarama uye kufema zvinhu zvese panze. Izvi 60-paundi (27 kg) bhora rekushanya richafara kurova nzira dzekukwikwidza newe kana kumaka pamwe kwekupera kwevhiki yekudzika musasa.
Ingo ita chokwadi chekuzvichengeta pane leash. Spangold Retrievers vanoda kutenderera!
Muchokwadi, Spangold Retrievers inofanirwa kugara mudzimba dzine mayadhi akachengeteka. Vanoda kutenderedza 45-60 maminetsi ekurovedza muviri zuva nezuva , uye nekuda kwekuchengetedzeka kwavo (uye nekwamakudo squirrels), fenzi chinhu chakakosha.
Sangana naKahlua, weChirungu Mastiff & Golden Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Ko 100+ mapaundi (45 kg) yesina-kumira simba kurira senge mwana wako akakwana? Zvakanaka, usatarise kupfuura iyo Chirungu Goldstiff !
Idzi imbwa dzakakura jumbo dzinofarira, kutaura zvishoma. Vachatamba nevana vako muswere wese wezuva uye vachiri kumukira kune jog yemanheru yakatenderedza block!
Zvinonzwisisika zvakanyanya kudzivirirwa nekuda kwavo Mastiff genes, Chirungu Goldstiffs zvinoda varidzi vakazvipira ndiani anogona kuvadzidzisa nekushamwaridzana navo kubva pahudiki.
Vimba nesu, zviri mukufarira kwevanhu vese kuti iyi mammoth yembwa ine hunhu hwakanaka!
Goridhe Chirungu Bulldogs ndidzo dzimwe nzira dzakanaka kune dzakasununguka Chirungu Bulldogs , asi iwe unenge uchiri kuda kusarudza vafudzi zvakanaka.
Hutano hunoshuvira parutivi, Golden Chirungu Vanodheerera vari, mune rimwe shoko, vakakosha. Iine yavo goofy grins, aya ma canine haasi mashoma kupfekedza.
Vari inowanzoita kuwedzera uremu , zvakadaro. Sezvo zvichidakadza sezvingaite puppy pudge yavo, dzivisa kuwira mumusungo wekubata kwakanyanya uye kushoma kwekuita maekisesaizi. Iyi pooch isingagutsikane inotsamira pakurangwa kwako kuti ugare uine hutano!
Kana iwe uchida iyo Bulldog inotaridzika neinowedzera mitambo, funga iyo Ndarama American Anodheerera . With American Bulldog majini, iyi canine inogona kukura kusvika 75 mapaundi (34 kg) yemhasuru yakachena. Uyu weGoridhe American Bulldog mbwanana watozvirova dundundu retsandanyama!
Golden American Bulldogs vanoda kutambanudza makumbo uye kuwana rowdy, asi kwete hazvo mune imwe mhuka dzinovaraidza. Kutanga kushamwaridzana ndiko kukoshesa yeiyi canine ine simba!
Izvo zvakare zvakakosha kuti utore zvitupa zvehutano zvevabereki vako veGolden Bulldog. Iwe unoda kuve nechokwadi kuti mwana wako anouya kubva kune yakanaka stock kuti aipe iyo yakanyanya kunaka mhando yehupenyu inogoneka.
Sangana neBurton, iyo Rhodesian Ridgeback & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Iyo ngura-toni Ndarama Ridgeback yakasimba uye yakavakwa zvakanaka, kazhinji inorema pamusoro 80 mapaundi (36 kg) kana yakura zvakakwana.
Vanowanzove vane bvudzi rakapfupika kupfuura mamwe maGolden musanganiswa, zvichivaita sarudzo yakanaka kune varidzi vembwa vasingade kushandisa yakawanda nguva pakushambidzika.
Rhodesian Ridgebacks vakarwa neshumba kamwechete pane imwe nguva, uye zvisaririra zvavo simba rekuzvidzivirira une chokwadi chekudyara mune yako Goridhe Ridgeback. Kana iwe uine uye wakadzidzisa mabheji ekudzivirira zvisati zvaitika, iyo Goridhe Ridgeback inogona kunge yakakukodzera iwe!
Sangana neScully, iyo Catahoula Leopard Imbwa & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Unogona kutsanangura iyo Ndarama Catahoula sekufema. Taifanira kubvumirana. Yavo bhuruu kana shava maziso ndiwo mukwanisi wakakwana wechiedza chavo, dzimwe nguva mavara ane mavara.
Vatsvagiri uye vanoshanda pamoyo, Golden Catahoulas unzwe zvakanyanya pamba mumhuri dzinoshanda neyadhi huru, yakavhurika.
Iine huwandu hwakaringana hwekurovedza muviri uye kurovedzwa, iyo Golden Catahoula mwana ane rudo, anoteerera. Chekutanga-nguva varidzi imbwa uye vane ruzivo vabereki vevapanana zvakafanana vachada ichi chakayambuka!
Sangana neShih Tzu & Golden Retriever musanganiswa
Iyo Ndarama Shih Tzu inozivikanwa zvakare se Shretreiver . (Edza kutaura izvozvo kashanu nekukurumidza!)
Idzi pupu dzinovimbiswa kuve nedzakanaka, refu majasi uye nehunhu hunhu. Izvo zvisina kuvimbiswa kukura kwavo chaiko. Shih Tzus zviri zvishoma, uye maGolden Retrievers haasi.
Yako Goridhe Shih Tzu inofanira kunge iri pakati nepakati.
Anotapira sezvaari, Goridhe Shih Tzus hazvisi nyore. Kana iwe uine rombo rakakwana kuti uwane imwe, iyo Golden Shih Tzu inogadzira shamwari huru yemhuri !
Sangana naJackson Storm, iyo Blue Heeler & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Ndarama Vanonzwa ndiwo mhedzisiro yemhando mbiri dzebhuruki dzisingatarise zvakafanana. Saka nekudaro, iwe unogona kutarisira izvo zvisingatarisirwi neiyo hybrid.
Mazhinji achange ari epakati kuvaka, kwete kupfuura 75 mapaundi (34 kg). Asi jasi ravo ruvara uye kureba? Iko hakuna kutaurira.
Muchokwadi Mombe dzeAustralia fashoni, Goridhe Heelers vanokurumidza, vanofarira vadzidzi vane yakasimba kufudza hunhu . Kuwanda kwekurovedza muviri uye yakawanda pfupi, inonakidza yekudzidzisa zvikamu zvinogona kuendesa Blue Retriever's zvakasikwa kugona uye kudzikisira hunhu husingadiwe, sekutsemura kana kutsenga.
Sangana naJager, iyo Pug & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Iyo diki- kusvika pakati nepakati Ndarama Pug ndiwo musanganiswa wakakwana wemutsa uye kurinda. Kunyange hazvo kusanganisa kwegoridhe kwakakwenenzverwa kwakanyanya kunaka kuti kutyisidzire, havazove nedambudziko rekukuzivisa nezve njodzi inogona kuitika.
Uye kana iyo njodzi ikapfuura? Gadzirira nguva yekutamba! Ndarama Pugs dziri sekungoda mafaro sezvavangwarire , Kugadzira ichi chimwe chakakomberedzwa.
Oo, uye nezve iwo makwinya: ita shuwa iwe vachengete akachena uye akaoma . Kana hunyoro hukawedzera mumakanda ako eGoridhe Pug, kutsamwa kana hutachiona hunogona kukura.
Sangana naValco, iyo Poodle, Cocker Spaniel, & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Iwe unogona kunge wakanzwa ichi chakayambuka chinonzi a Nyaradzo Retriever kana Mudiki anotora . Sezvo iwe ungangodaro wakafungidzira kubva pamazita ayo emadunhurirwa, iyo Mini Goridhe Retriever ndiyo quintessential canine shamwari.
Izvi musanganiswa wemarudzi matatu ine chitarisiko chisingafungidzike zvachose, asi iwe unogona kuzorora uine chokwadi chekuti idzi vana dziri inotarisana nevanhu uye tarisa kufadza.
Sangana neGreyhound & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Makumbo marefu uye mutambi anovaka anoita iyo Goridhe Greyhound yakanyatsokodzera kumarudzi ese ezvekunze zviitiko.
Uye pakati pe Greyhound's kukurumidza kwemheni uye hunhu hweGoridhe hwekupenga, injini yeGoridhe Greyhound haimboita kunge inopera chiutsi. Vanomhanya, iwe unogona kunge wakasangana nemutambo wako nerudzi urwu rwakavhenganiswa!
Goridhe Greyhound kazhinji ane hutano uye anofanirwa kurarama Makore 10-12 nekuchengetwa kwakakodzera. Zvakadaro, ivo vanogona kunge vachida bloat uye mamwe marudzi ekenza . Kurudzira iyi peppy pooch kuti izorore mushure mekudya, uye ugare pamusoro pekushanyirwa kweveteti kuti uvachengetedze sehutano sezvinobvira.
Sangana naCody, iyo Shiba Inu & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Ndarama Shibha dzakakora, hushamwari vana vane hukuru hunhu. Dzimwe nguva hunhu ihwohwo hautenderi nzvimbo yakawanda yezvimwe zvipfuyo, zvisinei. Zvichienderana nehunhu hwako hweGolden Shiba, vanogona kuve vakasununguka kuve mumwe wako uye chete furry shamwari.
Izvi zvinonyanya kuitika kana uine mhuka diki kumba. Iyo Golden Shiba ine yakanyatsogadziriswa mhuka yekutyaira , izvo zvinogona kutsanangudza dambudziko remhuri hamster!
Sangana naPokki, the Maltese & Golden Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Kusanganisa zvidiki ChiMaltese ine hombe yeGold Retriever, iyo Ndarama Maltese idiki diki pane mamwe musanganiswa weGoridhe.
Ukuru hwehukuru hwevana hunogona kunge hwakaoma kuona, zvakadaro, saka chingofunga rudzi urwu kana iwe usingafarire kushamisika!
Inobuda uye isingatyi, iyo Golden Maltese ndeye makumbo mana anoenda . Kuti unyatsoita zvakanakisa chimiro chemasimba cheichi, sasa mafambiro uye utambe zvikamu zuva rese. Iyo Golden Maltese inoda kuchengetedza zvinhu zvinonakidza, mushure mezvose!
Goridhe Aussies uya mune imwe kaleidoscope yemavara, kubva nhema nhema, chena nendarama . Yakawanda mitambo jasi rakaenzanisirwa, asi iwo musanganiswa wemavara anosiyana.
Sangana neAustralia Mufudzi & Goridhe Retriever musanganiswa
Australia Retrievers inozivikanwa ne yakakwirira-kupfuura-avhareji zviitwa zvekuita . Tinofanira kucherechedza kuti chiitiko ichi chinofanira kusanganisira kukurudzira pfungwa, zvakare.
Uku kuyambuka kune tarisiro-yakanangana uye inoshanda. Pasina nzvimbo dzezvose izvi zvishuwo, vafudzi veGoridhe veAustralia vanogona kukuvadza kana kushushikana.
Sangana neAnatolian Mufudzi & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Kusiyana neGolden Retriever, Anatolian Vafudzi vane mukurumbira wekuva vadziviriri vanotyisa. Wako Goridhe Anatolian inogona kuve chero kupi kubva kungwarira uye kuregedza kune inoshamwaridzika uye inoshamwaridzika.
Kunyange hazvo hunyoro hwavo huri mudenga mudenga, maGolden Anatolians anovimbiswa kuve ari maviri akapfava uye akasimba.
Anatolians anogona kuyera zvakati kurei 150 mapaundi (68 kg). Kana iwe uchitsvaga lap imbwa, iyo Golden Anatolian haisi yako!
Sangana naRumo, iyo Schnauzer & Goridhe Retriever musanganiswa - Mufananidzo sosi
Imwe yeakajairika Goridhe inosanganiswa, iyo Ndarama Schnauzer Kazhinji mitambo chiratidzo cheSchnauzer ndebvu. Ivo vanouyawo mumatanho maviri ehukuru.
Tarisa Golden Schnauzer kubva pa Yakajairwa Schnauzer mubereki kana iwe uchida imbwa hombe. Kana mwana mudiki akakurisa kumhanya kwako, iwe uchazoda kutsvaga iyo Golden Schnauzer nayo Miniature Schnauzer midzi.
Kunyangwe yako saizi yeGoridhe Schnauzer, ivo vanogona kunge vari akangwara uye sassy . Ivo havadurure zvakawandisa sevamwe veGolden Retriever zvinosanganiswa, chero. Chokwadi pane zvakawanda zvekuda nezve iyo Golden Schnauzer!
Imwe neimwe yeGolden Retriever musanganiswa iri rakasiyana zvachose , uye zvakadaro anodiwa chose .
Nezvese izvo izvi zvifambiso zvinofanirwa kupa, chero chero muridzi wembwa aigona kuwana mumwe wavo anotevera mune yeGold hybrid.
Saka ikozvino zvawakave nemukana wekudzidza zvakawanda nezve aya akanaka-akasikwa canines, iyo yeGolden Retriever musanganiswa ine ziso rako? Regai tizive mune zvakataurwa!
Irish Doodle: Gwaro Rizere kuIrish Setter Doodle
Kusarudza Imbwa Inobereka
wirehaired dachshund puppies dziri kutengeswa
step in dog harness instructions
german shepherd yakasanganiswa nelab
shih tzu maltese mix hupenyu hunotarisirwa